we work – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Keybot 11 Results 6 Domains
Sisebenza kanzima ukuvikela u-Google kanye nabasebenzisi ezintweni ezifana nokufinyelela okungagunyaziwe kuya ekuguqulweni okungagunyaziwe, ukuvezwa noma ukoniwa kwemininingwane engakuthina. Ikakhulukazi:
Uma ulayisha noma uthumela ngenye indlela into Ezinhlelweni zethu, unikeza u-Google (kanye nalabo esisebenza nabo) emhlabeni wonke jikelele isigunyazo sokusebenzisa, sethule, silondoloze, sakhe kabusha, siguqule, senze imisebenzi esuselwe (njengaleyo esuke ekuhunyushweni, ukuboniselwa noma ezinye izinguquko esizenzayo ukuze izinto zakho eziqukethwe zisebenze kangcono nezinhlelo zethu), uxhumana, ushicilela, udlala emphakathini, uveza emphakahtini noma usabalalisa leyonto equkethwe. Amalungelo owahlinzekayo kuleso sigunyazo enzelwe inhloso enomkhawulo wokusebenzisa, ukuthuthukisa, kanye nokwamukela Izinhlelo zethu nokwenza ezintsha. Isigunyazo siyaqhubeka ngisho ngabe uyama ukusebenzisa uhlelo lwethu (isibonelo, ukwenziwa kohlu lwebhizinisi olengeze ku-Google Maps). Ezinye izinhlelo kungenzeka zikuhlinzeke ngezindlela zokufinyelela nokususa izinto eziqukethwe esezihlinzekwe kulolo hlelo. Kwezinye izinhlelo zethu, kunemibandela noma izisetho ezinciphisa ububanzi bokusebenzisa kwethu okuqukethwe okuthunyelwe kulezo zinhlelo. Qinisekisa ukuthi unamalungelo afanele ukusinikeza isigunyazo sanoma ikuphi okuqukethwe okuthumele ohlelweni lwethu.